Duqa Muqdisho oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo 30-sano si sharci daro ah looga heystay+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Duqa Muqdisho oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo 30-sano si sharci daro ah looga heystay+Sawirro
By Daahir Aadan / February 24, 2020 February 24, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa 30-Sano ka dib muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Xasan ku wareejiyay guri uu wakiil uga ahaa Muwaadin Cabdalla Cabdiraxmaan Alboosi oo si sharcidara ah hantidiisa looga heestay.
Wareejinta gurigaan kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir masuuliyiinta degmooyinka Xamar jajab iyo Xamar Weyne, sidoo kale taliyaha Saldhiga degmada Xamar jajab kormeer ku sameeyeen qeybaha uu ka kooban yahay gurigan oo ay ka muuqdeen burbur iyo dayac xoogan.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) Waxuu sheegay in uusan aqbali dooni in qof hantidiisa si sharcidara ah lagu heesto.
“Marnaba ma aqbali doono in qof muwaadin ah hantidiisa sharcidara lagu heesto waxaana ugu baaqaya qofkaste oo hantidiisa ama gurigiisa sharcidara lagu heesto in uu nala soo xariiro si aan xaquuqdiisa ugu soo dhicino, sidoo kale waxaan digniin adag u diraaya cidkaste oo dagan guri aysan laheyn ama xoog ku heesta hanti uusan laheyn in uu dib isaga wareeji hadii kale sharciga ayaan la tiigsan doona”.
“Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in si nabadgalya ah oo cadaalad kujirta naloogu wareejiyay gurigeynii oo muda 30-sano ah gacanteena ka maqnaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelineynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho sida Soomalinimada leh oo uu noogu garab istaagay inaan dib u helo hantideeni mudada fog inaga maqneyd”.
Xuska Sanadguuradii 14-aad ee Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb+Sawirro
Ciidanka Danab oo Carruur ay Al-shabaab barayeen is-qarxinta dib ugu celiyay waaliddiintooda
Xildhibaannada Golaha shacabka oo Maanta kulmaya
Madaxweynaha JFS oo ku wajahan Dhuusa-mareeb
Akhriso: magacyada horjoogayaashii la khaarijiyay+sawirro
Sii hayaha Wasiirka Dastuurka XFS oo ka warbixiyay halka uu marayo qorshaha Dorrasho ee Dalka